Olana be ny fandotoana ny rano maloto any amin'ny morontsiraka. Noho ny tsy fahitana ny loto sy ny fady mifandraika amin'izany, matetika ny olona dia manana fahatakarana voafetra ny habe sy ny hamafin'ny fandotoana rano maloto. Na eo aza ny fampivelarana ny vahaolana sy ny fanentanana ny saina dia singa iray lehibe hiatrehana io fanamby lehibe eo amin'ny tontolo iainana io, mila mijery lavitra ny fitsipi-pifehezana ny vatohara isika mba hanalefahana tsara ny loto maloto amin'ny rano maloto. Ireo mpitsabo an-dranomasina dia mila miara-miasa amin'ireo mpiara-miasa amin'ny sehatra maro, anisan'izany ny fahasalamam-bahoaka, ny fidiovana, ny asa soa ary ny teknolojia fanadiovana. Ny mpiara-miombon'antoka manan-danja hafa dia ny mpitantana ny tany amoron-tsiraka sy ny faritra atsinanana, ny birao fizahan-tany, ny fitaovana ary ny mpanao politika.
A Fomba fitantanana 'ridge-to-reef' mampifandray ny hetsika fitantanana ny tany amin'ny rano amoron-dranomasina ho an'ny vahaolana mitambatra manerana ny rano sy manerana ny masoivoho. Ny tetikasa any an-tampon'ny haran-dranomasina dia miasa mba hanatsarana ny fitantanana rano maloto sy mampihena ny fandotoana an-tanety, ka manome tombony ho an'ny haran-dranomasina, tontolo iainana ety an-tany ary olona. Ny paikadim-pitahirizana rano velona - toy ny fampitomboana ny velaran-tany, ny zavamaniry ary ny faritra mando, dia mampihena ny fikorianan'ny loto ao anaty ranomasina. Ny fisamborana rano maloto rehefa mihetsika midina izy dia mampitombo ny fiatraikany amin'ny fomba fitsaboana, mampihena ny isan'ireo loto mandoto ny tontolo iainana an-dranomasina.
Fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano iaraha-miasa
Jereo ity tranga fianarana momba ny fananganana ny Work 4 Water, vondrona mpiaramiombon'antoka niasa hamorona asa sy hiatrehana ny fandotoana rano maloto amin'ny alàlan'ny fanoloana cesspools ao amin'ny State of Hawaii.
Ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano dia matetika ataon'ny masoivohon'ny governemanta eo an-toerana, fa ny fiaraha-miasa amin'ireo fikambanana eo an-toerana sy ireo mpilatsaka an-tsitrapo dia afaka manitatra ny fahafaha-manao, manangana fahatakarana ny olana ary manampy amin'ny fiarovana ny olona sy ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fanentanana ny fanovana ny fitondran-tena izay mahasoa ny tontolo iainana. Ny fandraisana an-tanana ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao anatin'io dia manampy azy ireo hahita ny olana voalohany ary hanompo amin'ny maha tompon-daka azy ireo hampita ny valim-pikarohana sy hananganana tohana ho an'ny vahaolana. Izy io koa dia manome ny mpitantana sy ny mpahay siansa tena ilaina fanohanana eny ifotony ary afaka manamora ny fiaraha-miasa amin'ny oniversite, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, masoivohon'ny governemanta ary mpikaroka eo an-toerana.
Modely iray ho an'ireo mpitantana liana amin'ny fanombohana programa fanandramana momba ny kalitaon'ny rano siansa olom-pirenena Hui O Ka Wai Ola any Maui, Hawaii, Etazonia. Amin'ny alàlan'ny fandrindrana sy ny fanohanan'ity programa ity dia manangona santionan'ny rano ireo mpilatsaka an-tsitrapo (mifanaraka amin'ny fenitra sy ny kaomina eo an-toerana sy ny firenena) ary mitondra azy ireo any amin'ny laboratoara amin'ny lisea natokana ho an'ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano.
Ny angona avy amin'ny ezaky ny santionany eny an-tsaha dia atambatra ho tahiry, hadihadio ary hofintina mba hanomezana fanazavana fohy azo ampiasaina hanarahana ny fisian'ny fandotoana, hahafantarana ny fivoaran'ny rano sy ny haran-dranomasina rehefa mandeha ny fotoana, ary hanohanana ny fanapaha-kevitra mifandraika amin'ny fenitry ny kalitaon'ny rano sy drafitra fitantanana. Raha mila fanazavana fanampiny momba ity programa ity, jereo ny webinar momba ny Hui O Ka Wai Ola.
Fiaraha-miasa amin'ny Sector WASH
Ny fizarana ny fahaiza-manao eo amin'ny fiarovana sy ny rano, ny fanadiovana ary ny fahadiovana (WASH) dia zava-dehibe amin'ny famolavolana vahaolana momba ny fahadiovana maharitra izay miaro ny olona, ​​ny harena voajanahary ary ny tontolo iainana. Ilaina ny fahalalan'ny mpitantana an-dranomasina momba ny tontolo iainana anaty ranomasina amin'ny famolavolana vahaolana hiatrehana ny loza mitatao amin'ny fiainana an-dranomasina sy ny fahasalaman'ny olombelona. Amin'ny pejy 16 - 18, Torolàlana ho an'ny mpitsabo iray amin'ny fandotoana rano maloto amin'ny ranomasina manasongadina ireo sehatra lehibe iarahan'ny mpitantana miara-miasa aminy: ny governemanta eo an-toerana sy ny firenena, ny mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria, ny mpanao asa soa, ny mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka ary maro hafa. Ny fandraisana andraikitra WASH dia afaka manatsara ny fahazoan'ny olona rano madio hisotro sy hanariana fako azo antoka ary hampahafantatra ny fomba fidiovana tsara mba hampihenana ny fihanaky ny aretina. Ireo fandraisana andraikitra ireo dia mety ahitana tetikasa marobe:
Fandaharam-pampianarana any amin'ny sekoly sy ny fiarahamonina
Fanomezana savony na sivana amin'ny rano
Fiaraha-miasa amin'ireo orinasa sy mpiasa eo an-toerana amin'ny fananganana sy fitazonana trano fidiovana na fidiovana
Fiaraha-miasa amin'ny governemanta eo an-toerana hametrahana fomba fanao tsara indrindra hiatrehana ny fako
Hetsika fikarohana sy fianarana
Ny fady efa ela be manodidina ny fako dia mametraka fanamby manokana amin'ny fampitana hevitra momba an'io lohahevitra io. Ny fanokanana fotoana hahalalana ireo fady ireo sy izay eritreretin'ny mpihaino anao momba ny fako sy ny fanafoanana ary ny fitantanana ny fako dia zava-dehibe amin'ny famoronana vahaolana mahomby. Ho an'ny fandotoana rano maloto, ny fanadihadiana ny haben'ny olana dia fanombohana lehibe hamantarana ireo fanamby eo an-toerana sy hametrahana tanjona mifanaraka amin'izany. Fanamby iray hafa ny fandraisana anjara amin'ny fiarahamonina ka manohana sy / na mandray anjara amin'ny vahaolana fanadiovana anao izy ireo. Ny fanentanana ny olona hanao zavatra dia tsy tonga dia haingana. Ny fifandraisana stratejika dia afaka manampy amin'ny famahana ireo olana ireo.
Ny serasera stratejika dia ny fampiasana fifandraisana misy tanjona mba hahatratrarana tanjona na vokatra manokana. Mifantoka amin'ny fandefasana ny hafatra mety amin'ny olona marina (na ny mpihaino) amin'ny fotoana mety amin'ny alàlan'ny fantsona mety hahatratrarana tanjona manokana.
Ity fomba ity dia afaka manampy ny mpitantana sy ny mpikaroka an-dranomasina hanangana fanohanana, hampiakatra ny fahatsiarovan-tena, hiteraka famatsiam-bola, hanamafy ny fifandraisana ary hanan-kery eo amin'ny fitondran-tena sy ny hevitry ny besinimaro hahatratrarana tanjona lavitra sy hetsika fohy hatao eny an-dàlana. Na inona na inona filàna dia araho ireto dingana ireto mba hahazoana antoka fa kendrena, atokana ary ara-potoana ny seraserao:
Hitety ny Fifandraisana stratejika ho an'ny fiarovana torolàlana ho an'ny torolàlana fanampiny, ohatra, ary ny takelaka fanomanana.